Xildhibaan Jindi oo dhaliilay siyaasadda dowladda federaalka ee ku wajahan doorashooyinka Jubbaland – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay wax uu ku sheegay fara-gelin qaawan oo lagu hayo dowlad-goboleedka Jubbaland.
Waraysi uu siiyay warbaahinta Kalfadhi wuxuu ku sheegay in ay jirto faragelin qaawan oo ay dowladda federaalku ku hayso arrimaha Jubbaland oo dhowaan geli doonta doorasho, taas mid la mid ahna hore loogu hayay Galmudug.
Nidaamka federaalka ee dalka ayuu sheegay inuu yahay mid muhiimad weyn leh loona baahan yahay in dowladdu ay iska xilsaarto sidii wada-shaqayn looga dhex abuuri lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga dheerano awood ku muuquunis.
“Dowlad-goboleedyadu doorkooday leeyihiin haddaan muhiimadooda iyo miisaankooda la siininna dowladnimo nooma jirayso, xaqiiqadu waa sidaas” ayuu yiri Xildh. Jundi
Xildhibaan Jindi ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha federaalku ay dhowaan soo saartay habraac doorasho oo ka kooban 27 qodob oo khuseeya doorashooyinka Jubbaland, kaas oo ah mid aan hore loo arki jirin laguna dhiqi jirin dowlad-goboleedyada kale. Arrintaas ayuu ku tilmaamay qorshe fowdo lagu gelinayo dalka.